News - (Gbado anya na FOEN) Nchekwa nke ibo ụzọ na Windows n'okpuru ajọ ifufe 18 gbara ama nchekwa nke usoro nchekwa nchekwa elu nke ibo ụzọ na windo.
(Gbado anya na FOEN) Nchekwa nke ibo ụzọ na Windows n'okpuru ajọ ifufe 18 gbara ama nchekwa nke usoro nchekwa nchekwa elu nke ibo ụzọ na windo.
Yutu - ajọ ifufe siri ike, kụrụ US agwaetiti Mariana nke US, na-akpata ụfọdụ mmerụ ahụ na mbibi nke ụlọ, na-akụda ụlọ, na-agbada mkpanaka ike ma na-ahapụ obodo dị iche iche.
N'ọzara nke ụdị ajọ ifufe 18 mebiri emebi, a ka nwere ugwu dị n'akụkụ ugwu nke kpatarala ihe ịtụnanya dị ukwuu ọbụna n'obodo ndị mepere emepe.Even ka ajọ ifufe fere iri na asatọ kwụsịrị, ọ ka bụ nke a na-enweghị ike ịkọwa, na-enyere ụlọ ahụ aka ịpụ na ụdị nke iri abụọ. ajọ omimi. Ọnụ ụzọ na Windows na-arụ ọrụ dị mkpa.
Ọtụtụ n'ime ọnụ ụzọ na windo enweghị ike ịba oke oke ikuku. Kaosinadị, ọnụ ụzọ nchekwa na windo ndị dị elu nwere ike ịkwado n'okpuru mmegide nke ajọ ifufe 18. Enweghị mmebi, enweghị mgbawa.
Gburugburu obodo ahụ bụ “ebe ikuku na-eme ka mmiri sie ike” na “nnukwu mmiri na-emechi ọnụ.” Agbanyeghị na enwere oke mmiri na mpụga windo ahụ, enweghị oghere dị n'etiti Windows na ọnụ ụzọ.
Nnwale nke afọ iri abụọ na asatọ agbaala elu nchekwa nke Windows na ọnụ ụzọ nchekwa FOEN.
ỌR doors ụzọ aluminom na sistemu windo. Arụmọrụ bụ data obi. O nwere ikuku nnochi, mmanu mmiri di elu, ike ya di elu ma nwekwaa ezigbo okpomoku, ihe akaebe udu na ugha nke oma. Ogo nke ikuku nke enweghi ike iru eru nwere ike iru 6 nke nwere ike ịkwụsị ịdọrọ ikuku na ọnụ ụzọ uzuzu. Debe ụlọ ọcha. Mkpuchi ọkụ bụ ihe ọzọ dị mkpa, ihe K bụ 0.8, ike dị ala, mee ka ụlọ gị dị ọkụ n'oge oyi ma dị jụụ n'oge ọkọchị. Ike ikuku iguzogide ike bụkwa ihe pụtara ìhè nke ahụ, ngwaahịa agaghị emebi emebi ma ọ bụ daa na 100meters elu. Igwe anaghị egbochi mmiri nke ọma, mmiri ga-eme mmiri agaghị eru n'okpuru afọ iri na abụọ. Nchịkwa ụda ikpeazụ gara aga, Belata 35 db.
Ruo ugbu a, anyị emeela nchọpụta ma zụlite usoro 4 kachasị: German Eiko Series, usoro ụlọ okomoko, oke usoro na nke oge ochie nke ndị China.
FOEN bụ ụlọ ọrụ mbụ guzobere Aluminom Window & Door System Institute Na China. Mgbe ụfọdụ, ndị ahịa anyị ga-eleghara akụkụ a anya. Ọ bụ ezie na nke a bụ akụkụ kachasị mkpa ka a ga-elekọta maka sistemụ windo na ụzọ otu anyị. Nke mbụ pụtara ụzọ na-adịte aka. Ọ bụ ya mere anyị ji jiri ha dị nganga. Nke a kpatara anyị ji nwee Nnukwu Aluminom Window & Door System Research Team Na China. Oge ijiji, na 2017, ụlọ ọrụ alumini nke abụọ Henan FOEN aluminom bụ nke gbara mbọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu oge ahụ, Foen abụrụlarị ndị na-enye aluminom Top 5 na China ma merie Factorys 500 kachasị ọnụ ahịa China. Ruo ugbu a, anyị ka na-aga n'ihu. Ihe anyị rụzuru bụkwa ọrụ dịịrị anyị. Anyị ga na-elekwasị anya mgbe niile ịnye ndị ahịa anyị ọrụ kachasị ọrụ.